Xiaomi Mi Pad 4: Qeexitaannada, qiimaha iyo bilowga | Androidsis
Eder Ferreño | | Shiinaha Shiinaha, Kiniiniyada Android, Xiaomi
Maalintii ayaa timid. Shirkadda Xiaomi ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay kiniinkeeda cusub ee loo yaqaan 'Xiaomi Mi Pad 4'. Waa jiilka cusub ee kiniiniyada laga soo qaatay magaca Shiinaha. Waxay ku timaaddaa isbeddello badan, oo lagu sharaddeeyo naqshad leh shaashad xoogaa weyn oo si dhib yar loox leh, marka lagu daro processor-ka cusub, kaas oo siin doona awood dheeri ah. Marka la soo koobo, talaabo horay loogu qaaday qoyskeeda kiniiniyada.
Sidii horeyba loogu soo sheegey dhacdada kahor, waxaa jira laba nooc oo Xiaomi Mi Pad 4 ah. Way kala duwan yihiin waxayna kuxiran yihiin isku xirnaanta, maaddaama mid uu ku shaqeynayo WiFi oo keliya kan kalena yahay nooca LTE. Maxaan ka filan karnaa kiniinkan cusub?
Iyadoo labadan moodal sumadda Shiinaha ayaa rajeyneysa inay sare u qaaddo qayb suuq ah oo aan waligeed kacsaneyn. Tan iyo inkasta oo ay xaqiiqda tahay in noocyada ugu waaweyn ee suuqyadu ay leeyihiin kiniinno la heli karo, iibiyadu weligood kuma dhammaan inay noqdaan kuwa ugu sarreeya. Waxaan marka hore kaaga tagaynaa qeexitaannada qaabkan.
1 Tilmaamaha Xiaomi Mi Pad 4
Tilmaamaha Xiaomi Mi Pad 4
Waa nooc ku habboon dhammaan adeegsadayaasha raadinaya shaashad ballaaran. Sidoo kale, marka la eego astaamaha, Waa qaabka ugu wanaagsan ee ay Xiaomi soo bandhigtay illaa iyo hadda. Boodbood tayo leh oo muhiim ah. Kuwani waa qeexitaankiisa:
Screen: 8,0 inji oo leh saamiga 16:10 iyo xalka 1920 x 1200 pixels
Gacaliye: Qualcomm Snapdragon 660
Cámara trasera: 13 Xildhibaan leh fur f / 2.0
Kaameerada hore: 5MP oo leh fur f / 2.2
Batariga: 6.000 mAh
Nidaamka hawlgalka: Android 8.1 Oreo oo leh MIUI 10 oo ah lakab habeyn ah
Cabbirada: 200.2 x 120.3 x 7.9 mm
Peso: 342,5 garaam
kuwa kale: Bluetooth 5.0, USB Type C, 3.5mm jack
Cabirka shaashadda ayaa waxyar kordhay, inkasta oo aysan ahayn farqi weyn. Laakiin maqnaanshaha looxyada shaashadda Xiaomi Mi Pad 4 waa isbeddel naqshad caan ah marka loo eego jiilkii hore. Marka sumadda Shiinaha waxay la jaanqaadeysaa waxa aan maanta suuqa ku aragno.
Waxyaabaha ugubadan ee kiniiniga kujira ayaa ah isticmaalka Snapdragon 660 oo ah processor. Waa nooca ugu awoodda badan gudaha bartamaha kala-soocayaasha processor-ka. Marka waxaa lafilayaa inay siin doonto waxqabad wanaagsan kaniinigan. Intaa waxaa dheer, waxay la socotaa laba isku-darka RAM iyo keydinta gudaha, si ay u doortaan dadka isticmaala.
Waxa kale oo xusid mudan batteriga weyn ee Xiaomi Mi Pad 4. Sumadda Shiinaha ayaa doortay batari dhan 6.000 Mah, taas oo ah inay siiso is-maamul ku filan dadka isticmaala. Ku habboon inaad awood u yeelato inaad isticmaasho intaad safreyso. Waxay horeyba ula timid Android 8.1 Oreo oo ah nidaamka qalliinka, oo ay taageerayaan MIUI 10 oo ah lakab habeyn ah. Marka isticmaaleyaashu hadda way ku raaxeysan karaan dhammaan wararka ku saabsan nidaamka hawlgalka kiniinka.
Munaasabaddan bandhigga ah ee kiniinka cusub ee nooca Shiinaha, bilaabitaankeeda Shiinaha horay ayaa loo xaqiijiyay. Daahfurkaani wuxuu dhici doonaa dhammaadka bishaan Juun, sidaas darteed waxay garaaci doontaa dukaamada toddobaadkan. Waxa ugu nabdoon jimcaha ayaa horay looga heli jiray Shiinaha.
Waxba lagama sheegin bilowgeeda caalamiga ah. In kasta oo aysan qariib noqon doonin in Xiaomi Mi Pad 4 uu si rasmi ah u yimaado Spain. Laakiin xilligan wax taariikh ah lama siinin. Marka waxay umuuqataa inaan sugeyno xoogaa wali.
Waxa aan u baahnayn inaan sugno waa inaan ogaanno qiimaha noocyada kiniinkan. Tan iyo markii ay shaaca ka qaadeen qiimaha noocyada kala duwan ee aan ka heli karno tan Xiaomi Mi Pad 4. Kuwani waa qiimaha lagu bilaabi doono Shiinaha iyo qiimaha ay ku beddelayaan:
Mi Pad 4 WiFi oo leh 3/32 GB: Qiimaha 1099 Yuan (145 euro si loo beddelo)
Mi Pad 4 WiFi oo leh 4/64 GB wuxuu ku kacayaa 1399 yuan (184 euro in la beddelo)
Xiaomi Mi Pad 4 LTE oo leh 4/64 GB ayaa lagu qiimeyn doonaa 1499 yuan (197 euro isbeddelka)
Qiimaha ayaa laga yaabaa inuu waxyar ka sarreeyaa bilaabitaankiisa mustaqbalka ee Yurub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Pad 4: Kiniiniga cusub ee sumadda Shiinaha